Wednesday June 17, 2020 - 19:19:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya waqooyiga wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada sida gaarka ah utababaran ee atraakta ay xuduud beenaadka ka gudbeen ayna dagaallo uga jiraan dhulka buuralayda ah ee wadankaasi.
War kasoo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda dabadhilifka turkiga ayaa lagu sheegay in ay iclaamiyeen howlgal melleteri oo loogu magac daray cijida shabeelka, howlgalkaas oo lagu beegsanayo maleeshiyaadka xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee loo yaqaan PKK.
Turkigu wuxuu sheegay in ciidamadiisa lugta uu geliyay waqooyiga ciraaq kadib duqeymo qaatay 48 saacadood oo ay ku hayeen deegaannada xuduud beenaadka kulaala, illaa 80 quqeyn oo ay geysanayeen diyaaradaha casriga ah ee F16-ka iyo kuwa drone -ka ayaa la sheegay in ay ka dhaceen waqooyiga ciraaq.
Goob joogayaal ayaa sheegay in ay arkeen gaadiidka taangiyada iyo ciidamo lugaynaya oo xuduudda ka gudbay islamarkaana fogaan dhan 15 Km gudaha ugalay dalka ciraaq.
isniintii lasoo dhaafay ayuu turkigu iclaamiyay howlgal xagga cirka ah oo uu ugu magac daray cidiyaha gorgorka, Khaluus Aakaar oo ah wasiirka difaaca Turkiga ayaa sheegay in howlgalkan uu jawaab celin u yahay weeraro ay maleeshiyaadka PKK ku qaadeen deegaanno xuduudda dhaca gaar ahaan gobolka Waan ee ku toosan Koonfur bari dalka Turkiga.
Xukuumadda dabadhilifka Ciraaq ayaa bayaan ay soo saartay kusoo dhoweysay howlgalka Atraakta ee ka dhanka ah PKK waxayna ku tilmaamtay tallaab horay loo qaaday oo ka dhan ah fallaagada sida ay hadalka udhigtay balse dibad baxyo ay dad kurdiyiin ah ka dhigeen magaalada Arbiil ayay ku sheegeen in howlgalkan ka yahay mid ka dhan ah madax banaanida wadanka